jeudi, 09 mars 2017 20:15
Fenoarivo Atsimondrano : Une digue a cédé
La Sisaony sort de son lit, provoquant la rupture d’une digue à Andrefan’Ambohimandroso, à 500m de la RN1 à Fenoarivo Atsimondrano
Plusieurs centaines d’hectare de rizière sont sous les eaux depuis ce midi.
jeudi, 09 mars 2017 20:14
Antsalova : Miditra ny vola ho an’ireo manana “panneau solaire”
Tsy nahasakana ny fankalazana ny fetin’ny 8 marsa ny tsy fandehanan'ny jiron'ny Jirama eto Antsalova, noho ny fahasimban’ny milina rehefa nipoahan’ny varatra.
Nilaza ny tomponandraikitry ny Jirama fa ho avy ato ho ato ny “dépanneur” avy any Maintirano. Horavana tanteraka ilay milina ka hamboarina. Mety haharitra ny fanamboarana.
Ny fahorian'ny sasany tokoa dia fifaliana ho an'ny sasany; miditra ny vola ho an'ireo manana “panneau solaire” satria dia 500 Ar no mamahana finday.
jeudi, 09 mars 2017 20:07
Amboasary Atsimo : Manararotra mamboly amin’ny rotsak’orana entin’ny Enawo ny tantsaha
Tamin-kafaliana no nandraisan’ny mponina taty Amboasary Atsimo, Faritra Anôsy, ny rotsak’orana nentin’ny rivodoza Enawo.
Manararaotra mamboly ireo tantsaha.
jeudi, 09 mars 2017 20:00
Fianarantsoa: Tsy mianatra ny mpianatra ny zoma 10 marsa
Nanatanteraka fidinana amin'ireo sekoly misy eto an-toerana ny talem -paritry ny fanabeazam-pirenena ity andron'ny 9 marsa ity.
Fanapahan-kevitra telo no nivoaka taorian'izany.
Noho ny fiakaran'ny rano sy ny ahiahy momba ireo fotodrafitrasa fianarana dia ny alatsinainy 13 marsa ho avy izao vao miverina an-tsekoly ny mpianatra.
Ankoatra'izay dia manome baiko ny tale-tsekoly rehetra ny Dren eto Matsiatra Ambony mba hanao tatitra miaraka amin'ny sary fanehoana ireo fahasimbana misy amin'ny toeram-pianarana tantanany.
Tapaka ambonin'izay fa afaka mandray traboina daholo rehefa sekoly angatahana izany.
Hatreto dia tsy mbola misy asa fandrindrana sy fandaminana mialoha sy mandritra ny fandalovan'ny rivodoza nataon'ny ratsamangaikan'ny BNGRC aty an-toerana.
jeudi, 09 mars 2017 19:46
Androndrakely: Miakatra hatrany ny rano
Tsy mitsahatra miakatra ny reniranon'Ikopa izay mandalo etsy Androndrakely.
Ahiana ho safodrano ireny toerana manamorina ny renirano ireny, ahiana koa ny ahavaky ny fefiloha.
jeudi, 09 mars 2017 19:27
La Reunion kely: Traboina avokoa
Difotry ny rano i La Réunion kely ary dia traboina avokoa ireo efa tsy manan-trano andavan'andro.
jeudi, 09 mars 2017 17:14
Ampefiloha: Mitoby ao amin'ny ANS ireo traboina
Mitoby etsy amin’ny ANS Ampefiloha avokoa ireo olona tra-boina vokatry ny rivo-doza ENAWO.
Toliara : Mibaliaka ny masoandro
Tsara ny andro eto Toliara ary mibaliaka ny masoandro. Maro ny vehivavy vory hankalaza ny andron'ny 8 martsa, saingy nofoanana tamin'ny ora farany izany ho firaisankina amin'ireo fianakaviana namoy havana sy fananana noho ny rivodoza Enawo izay nahafatesana olona.
jeudi, 09 mars 2017 16:32
Antalaha : Olona iray namoy ny ainy, potika 100% ny voly
Potika 100% ny fambolena, 80% ny trano fonenana ka ny 20% anaty rano. Olona iray namoy ny ainy tao belle rose, nianjera avy eny ambony manga. Ireo no tatitra vonjimaika voaray vokatry ny fandalovan'ny rivodoza tao Antalaha, izay Distrika nidiran'i Enawo.